काठमाडौँ । कोरोनाबाट मृत्यु भएका २ जनामा फरक-फरक लक्षण देखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा बिहीबार मृत्यु भएकी २९ वर्षीया महिलामा सुख्खा खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्याका साथै निमोनिया देखिएको थियो। यसैगरी, आ...
कोरोनाको उच्च जोखिममा काठमाडौँ उपत्यका
काठमाडौँ । लकडाउनको समयमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रिएकाहरू क्वारेन्टाइनबाहिरै रहँदा उपत्यकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिम देखिएको छ। सरकारले गत ११ चैतदेखि गर्दै आएको ...
उपत्यका छिर्ने नाकामा विशेष सुरक्षा सतर्कता
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण व्यापक बन्न नदिन काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाका जोडिएका नगरपालिकाले नाकामा विशेष सुरक्षा अवलम्बन गर्न थालेका छन्। उपत्यका बाहिरबाट लुकिछिपी उपत्यका छिर्...
अब अस्पतालबाट भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई गोली हानिने
वीरगञ्ज । स्थानीय प्रशासनले पर्साका अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित भाग्न खोजे नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले गोली हान्न सक्ने निर्णय गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतका अनुसार आइसोलेसन वार्डमा र...
सुत्केरी महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयमा त्रास
सिन्धुपाल्चोक । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण जिल्लाकी एक महिलाको बिहीबार राति उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि ती महिलाको प्रारम्भिक उपचार गरिएको अस्पताल तथा गाउँक्षेत्रमा उच्च सर्तकता अपनाइएको छ।...
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा परीक्षा भएका र विज्ञापन खुलाएका सबै पदको परीक्षा कोभिड-१९ को महामारी साम्य भएपछि लिने भएको छ। लोकसेवाको परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल भइरहेको बेला आयोगले महामारी सा...
काठमाडौँ । लकडाउनले सुनसान बनेका फराकिला सडक अझै सुनसान पारिए । तीनै सुनसान सडकको बीचबीचमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । दृश्य देख्दा लाग्छ, यत्रो सुरक्षाकर्मी किन राखिए होलान् ? शुक्रबार सितलनिवासदेखि नयाँ वान...
काठमाडौं । वैशाख ३० गते महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी बालिकामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ भेटियो । ६ वर्षीया ती बालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै अस्पतालका चिकित्सकलगायत ३६ जनाभन्...
नेपालका संक्रमितमा कोरोना लक्षण किन छैन ?
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमाल भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन ।’ अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बेग्लै प्रकारको संक्रमण भएक...
काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ । त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्स...